Ny dingana fototra 5 amin'ny fananganana ny lisitry ny mailaka | Martech Zone
Zoma, Oktobra 17, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Iray amin'ireo fomba mora indrindra hiantohana fa mailaka mailaka Mijanona eo amin'ny toerana tsara - midika izany fa ny mailaka ataonao dia mampiditra azy amin'ny boaty, fa tsy ny fampirimana junk, dia amin'ny alàlan'ny fananana fomba azo antoka sy mazava hanangonana adiresy mailaka. Izay rehetra ivelan'ny endrika opt-in izay mazava ho azy fa mampita ny tolotra ary mametraka ny andrasana amin'ny famandrihana (fahazoan-dàlana voalaza sy tsy misy dikany) dia mety hisy fiantraikany amin'ny mety hisian'ny mpandray iray hanindry ny bokotra SPAM. Ary rehefa manao izany izy ireo dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahafahanao mahazo mailaka amin'ny boaty mailaka an'ireo mpamandrihana hafa rehetra.
Mety ho toa ny fananganana lisitra opt-in hatrany am-boalohany no asa tsy mampandeha indrindra, fa tena ilaina tokoa. Rehefa manangana lisitra tsara ianao dia hanana mpihaino babo vonona hihaino izay holazainao. Ireto misy dingana tsotra 5 izay mekanika fototra amin'ny fananganana lisitry ny mpividy tsy mivadika. Vakio ny lahatsoratra feno Eto.
Navoaka ny mailaka dia orinasan-kevitra momba ny fanaterana entana. Nizara fampahalalana iray taonina momba ny fahaterahana izahay eto Martech Zone - aza hadino ny mijery ny anay mpanohana amin'ny 250ok raha mila fitaovana feno ianao hanampy anao! Ity dia dingana 5 mafy orina izay tokony ho fototry ny tranonkala rehetra sy ny programa marketing an-tserasera - ny fahafaha-misafidy mpamandrika mora foana izay ahafahanao mifandray matetika miaraka amin'ny tanjona hikolokoloana fifandraisana eo amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy.
Ny lakilen'ny fanombohana fananganana ny lisitry ny mailakao
Ny lohahevitra afovoan'ny safidinao dia ny hahitanao izay mahasosotra ny fanantenanao, omeo zavatra hamahana ny olana izy ireo ary avy eo dia hanome lanja tena izy amin'ny alàlan'ny programa mailakao mba hahafahanao manohy mamorona ny fifandraisana.
Fantaro izay tadiavin'izy ireo ary mitaona azy ireo hisafidy amin'ny varotra… ny famandrihana ho an'ny goodie.
mamorona pejy fipetrahana miaraka amin'ny lohateny fohy sy ny tolotra.
Add endrika iray izay hanangona ny adiresy mailaka sy fampahalalana fanampiny.
fitsapana ny endrikao! Niara-niasa tamin'ny mpanjifa marobe izahay izay tsy mba nanandrana ny endriny ivelany mihitsy… ary tapaka izy ireo!
Araho ny fifamoivoizana ary araho ny fiovam-ponao mba hahitana ny lanjan'ireo mpisoratra anarana sy ny tahan'ny fiovam-pony.
Soso-kevitra iray izay mitazona ny marina… aza omenao fotsiny ny goodieo amin'ny alàlan'ny fandefasana form. Aza hadino izany alefaso ny mailaka, Amin'izany fomba izany no ahazoanao antoka fa nampiasa adiresy mailaka marina ilay olona! Raha vantany vao manana ny fotony ny programa mailaka dia ireto no eto Fomba 15 hampitomboana ny lisitry ny mailakao!
Tags: lisitry ny mailakaopt-in mailakamailaka misoratra anaranamailaka fisoratana anarana endrikampandefa mailakamitombo ny lisitry ny mailakaomitombo ny lisitraomitombo ny lisitry ny mpanjifafisoratana anarana fanao fanao tsara indrindraendrika mpanjifalisitry ny mpanjifa